Sidan Samee Maalin Walba! - Daryeel Magazine
Sida dadka badankiisu ka siman yahay maalin kasta oo kuu bilata, waxaad rabtaa inay kuu noqoto mid ku raali galisa oo aad ku raaxaysato.Muuse, waxa uu ii sheegay in ay dhibi ka haysato shaqada oo uu diiqad, cidhiidhi iyo raaxo (Comfort) la’aan ku joogo.
Shaqadiisu ma xuma balse jawiga maalinta ayaan u ahayn mid soo dhaweeya. Maaha arin uu isagu kali ku yahay, waa xaalad haysata dad badan oo inaga mid ah, xal iyo maarena ay u la yihiin.
Waxaynu isku dayi doona inaynu Muuse iyo inta la midka ahba caawino, inagoo u tilmaamayna dhawr talaabo oo ay raacan, si ay shaqooyinkooda iyo maalintooduba u noqoto mid ku filan oo ay raaxo nafeed ku dareeman.
Ugu horayn dhawr talaabo ku bilaabo subaxa hore ee maalintaada.
·Isku day inaad u kacdo xili hore waliba salaada subax oo ah waajib diiniya, ugu yaraan 5:20-Subaxnimo (Xiliga saacada geeska afrika), markaa kadibna salaada sidaa ku soo tuko.
Subax hore hore inaad kacdo faa’idooyin badan ayaa ku jira oo ku anfacaya. Madaxwaynihii hore ee dalka maraykanka (Benjamin Franklin), waxa uu yidhi: “seexashada goor hore iyo kicitaanka goor hore waxa uu aadamaha siiya caafimaad, maal iyo xikmadba”.
Salaada subax kadib, xaafada kaalay oo isku day inaad koob biyo ah cabto, waliba si dagan.
Akhri xooga macluumaad (Xog) wax kuu faa’iidanaya ama wararka soo kordhayba, qoraal koobana isku day inaad samayso oo aad wax qorto (Qorshayaal maskaxdaada ku jira, waxaad maanta qaban doonto iwm).
Jimicsi samee ilaa mudo 20 ama 30 daqiiqo ah, waliba jimicsiga fudud. Faa’iidooyin badan ayuu jidhka u leeyahay, maalintaadana mid hufan ayuu kaaga dhigayaa, idanka alle.
Quraaco oo cun in kugu filan oo cuno ah, iskuna day inaad si is le’eg u fadhiisato markaad wax cunay.
Intaa kadib u diyaar garow shaqadaadi, dharkaagi diyaarso waliba xidho kuwa aad raaxo iyo kalsooni badan ku dareemayso, sidoo kalena qabo/samee wixii kale ee aad intaa ku darayso, si dagan.
Cadar isku soo shub adiga oo aan isku badinayn, waliba cadarada urta dheer leh, hadii aad awoodo.
Intaa marka aad ku bilowdo subaxaaga horeba, waxa la jooga xiligaad shaqada u bixi lahayd. Isku day inaad dhamaan talaabooyinkan raacdo, waxay kaa caawin doonaan inaad maalin hagaagsan hesho oo aad firfircooni iyo daal la’aan ku dhamaysato e’.
Guriga ka soo bax ugu yaraan saacad ka hor xiliga shaqadaada, mudo ilaa 30 daqiiqo ah hadii uu socodkaagu qaato, 30-ka kale waa inaad goobtaada shaqo diyaar ku ahaata (joogta).
Michael Kerr, oo ah khabiir dad la hadle ah (Public Speaker), dhinaca ganacsiga, qoraa iyo madaxwaynaha (Humor at Work) waxa uu ka yidhi arinkaa; “Dadka badankiisu shaqada waxay yimaadan iyagoo dagdagsan, sababto ah kamay iman guriga iyagoo haysta waqti ku filan, kadibna waxa ay dareeman isku buuq (Stress), uu ku sababo waqti yaraantaasi.
Shaqada marka aad bilowdo, hadii aad tahay qof kombuyuutar ku shaqeeya isku day inaad u fadhiisato si nafisa oo aanad ku foorarsan hoostana ka galin qalabka miiska saaran, balse aad si waafiya u fadhiisato. Sidaa marka aad samayso dhabarku ku xanuuni mayo, fadhiga iyo shaqadana kama caajisaysid.
Inta aad shaqada ku guda jirto, isku day inaad dhowr mar dhoola cadayso. Qosolka saafiga ahi waxa uu kaa caawinayaa inaad nafsi ahaan u diiranaato, sida uu suubanaha nabigeeni Maxamed, N.N.K.H inoo sheegayna qosolku waa sadaqo, waliba ka aad walaalka
u dhoolacadayso. Si furfuran oo wanaagsan, oo lab deeqidna leh dadka kula shaqaynaya ula dhaqan oo soo dhawee.
Sida caadiga ah kolay shaqada, waxa jira xili nasasho oo dadku soo yara shaaheeyaan ama nasasho kale oo kooban soo qaatan, sidaa awgeed ha cunin cunto culus iyo cuntooyinka isla markaaba la sameeyo sida jibista (Chips), waxay kugu keenayaan inaad caajisto ama hurdoba ku qabato. Sidaasi marka ay dhacdona shaqadaadi masii dhamayn kartid, diiqadna waad ka dareemay sii wadida hawsha aad hayso. Taa badalkeedana isku day inaad cunto jugulaatada madow oo kuu samayn karta firfircooni iyo soo jeedid buuxda. Sidoo kalena cab sharaabka noocsi midhaha ka samaysan, (Canbaha, tufaaxa, cinabka, muuska iwm).
Dhawrka talaabo ee aynu xusnay waxay kaa caawinayaan in maalin shaqeedkaagu ahaato mid aad mahadiso, adoo u niyad sana aad maalin kasta tagto.
W/Q: Cabdiraxmaan Xuseen Jaamac
Waa Maalinkaagii Maxaa Ku Dhacaya Jidhkaaga Haddii Aad Maalin Kasta Cunto 3 Xabbo Oo Timir Ah?? Cunista Xabad Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Xanuunada Indhaha Cunista 2 Xabbo Oo Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Cudurro Badan